Day: Mee 14, 2020
A gaghị emechi emechi iwu na Njem engergbọ njem
Na njem njem ụgbọ njem nke ụlọ, a ga-etinye udu mmiri maka udu mmiri ruo 19 nke July n'ihi ntiwapụ nke Covid-31 ga-adị n'etiti 100 na 500 liras. Mịnịstrị nke .gbọ njem na-ebugharị ọnụahịa maka njem ndị njem nke okporo ụzọ. [More ...]
Urslọ ahịa Azụmaahịa na Ọrụ Bursa, (BTSO), bụ nke mejuputara ọtụtụ oru maka Bazaar Historical na Hanlar Region, nke dị na etiti kachasị mkpa ebe ịzụ ahịa na azụmaahịa na-ewere ntụpọ ya, ya na coronavirus. [More ...]
Obodo Eskişehir, nke meworo nnukwu ego na njem ndị mepere emepe, ruru 75. Yıl Mahallesi site na City Hospital na Kumlubel site na Opera, mgbe 75. Y afterl Mahallesi na Şeker Mahallesi. [More ...]
Ngwa bidoro akwụkwọ ụgwọ ọnụahịa malitere na Antalya
Maazị Antalya Ndị Isi Obodo Mịnịsta Muhittin Böcek kwupụtara na ha amalite ngwa nkwụchi ụgwọ maka ndị Antalya nwere nsogbu akụ na ụba. N’ikwu na usoro ịkwụ ụgwọ ka emepere ka nke taa dị na akwụkwọ nkwusi ụgwọ kwụrụ ụgwọ, nke bara uru maka akwụkwọ ọnụahịa ASAT. [More ...]
Transportgbọ njem ọha na eze na-enwereghị onwe site n'aka Ultraviolet Ray
Onye isi obodo nke Obodo Kayseri Memduh Büyükkılıç, onye otu ASPİLSAN Board na ngalaba mahadum Erciyes nke injinia Assoc. Dr. O mere nzukọ na ntinye aka nke Ahmet Turan Özdemir. Na nzukọ ọgbakọ vidiyo [More ...]
Onye isi oche İBB Ekrem İmamoğlu bidoro iji kwado ndị mmadụ ego ma ọ bụ furu efu n'oge usoro ọrịa ahụ, ngwa "Invoice on the Fluid" na-eweta ndị ọrụ ebere na ndị ọrụ ebere na-ezukọta, ubi ahụ ahụghị aka na-enye aka. ngwa [More ...]
Ngwa Maskematic Mobile malitere na İzmir
Ndi isi obodo Izmir eweputala ngwa ihe maskematia di iche-iche n’ebe a na-enweghi obodo n’iile ma tinye ya n’ime ulo metro di iche-iche iji mee ka ndi mmadu mara n’igwe ihe omuma. Enwere ike itinye masematics mobile ebe ọ bụla. Na ntiwapụ nke Coronavirus [More ...]
Turkey Chambers na Stock Exchanges Union (TOBB), duziri site na isonye na Nzukọ Nzukọ Ọzụzụ Vntanetị Eskişehir, nke nrụnye na-aga n'ihu "Eskişehir Chamber of Industry - Vocational Training Center" nyere ozi banyere. [More ...]
Asım Taş, onye nwere olulu mmiri n’ala ya n’oge ọrụ ọdọ mmiri YHT kwuru na ụlọ ọrụ nkwekọrịta kpuchiri ihe ndị ọrụ ugbo a na-eli n’ime ite ahụ. Dị ka a ga-echeta; Asım, onye bi na Kurtköy nke Bilecik Center n'ime izu ndị gara aga [More ...]
Oku iji nye ndi ulo oru nkwado site na TÜBİTAK
Ministri nke oru na teknụzụ akwadebela oku ọhụrụ abụọ nke ga-eme ka mmekọrịta dị n'etiti ụlọ ọrụ ahụ site na ụlọ ọrụ ahụ dị mkpa, TUBITAK. Onye Minista oru na teknụzụ, Mustafa Varank ekwuputala oku maka nkwado okpukpu abụọ maka ndị ọrụ ugbo. "Iwu R&D" na [More ...]
38 Nde Turkish Liras nwetara
Zehra Zümrüt Selçuk, Minister nke Ezinaụlọ, Ọrụ na Ọrụ Ndị Ọrụ, emeela ka ikike nke ọrụ kichin ha na-akwado ruo 39 puku mmadụ 484 n'afọ a na n'ime ọnọdụ a, na-ebufe nde 38 lira na kichin ofe. [More ...]
Directorate Na-emeghe Maka Ndị Mmụta ịbanye YKS na Mee 18-19
Minista na-ahụ maka ime obodo zigara ọkwa ọzọ na 81 Gọọmentị Gọọmentị gbasara oge a na-alọta. Ekwuru ya na okirikiri na kemgbe ntiwapụ nke Coronavirus, e mere ọtụtụ ihe iji lụsoo ọrịa ahụ ma mejuputa ya. Anata [More ...]
Na okirikiri nke Ministri nke ime obodo zigara ndị gọvanọ, site na mgbe ntiwapụ nke ọrịa coronavirus, ndụmọdụ nke Ngalaba Ahụike na Kọmitii Sayensị kwekọrọ na ntuziaka Onye isi ala Recep Tayyip Erdoğan; ntiwapụ / mbufe kpatara site na ahụike ọha na eze [More ...]
Ngalaba Na-ahụ Maka Ọchịchị na Ndị Nleta Anya Izugbe nke Izmir Metropolitan zukọrọ maka nke abụọ iji chọpụta njirisi nke ga-adị irè na ụlọ oriri na ọ foodụ foodụ na nri na ihe ọ beụverageụ mgbe ezumike ahụ na usoro coronavirus. Izmir na-emejupụta Ọnọdụ Mgbakọ n’ịchịkọ ọgụ Coronavirus [More ...]
İzmir Science Board Kwuru na 'Agaghị emepe Shoppingzụ ahịa'
Mlọ Ọrụ Izmir Metropolitan Municipality Science Board nyere nkwupụta banyere mmeghe nke ebe ịzụ ahịa na Mọnde, Mee 11, dị ka nzọụkwụ mbụ na usoro nhazi iwu na ntiwapụ nke coronavirus. Kọmitii Sayensị “Ahụbeghị ike ọha [More ...]
Telegram nke Atatürk's First Champions Championship Yaşar Erkan
N’afọ 1936, ndị German haziri ahazi nke iri na otu n’egwuregwu Olympic ọgbara ọhụrụ na Berlin. Egwuregwu Olympic Greco-Roman egwuregwu asọmpi na-aga n'ihu na Halllọ Egwuregwu Deutschland Halle ruo ụbọchị anọ. Nke mbụ n’arọ iri isii na isii n’August 9, 1936 [More ...]
FNSS Defense Systems Inc. Armored Amphibious መኪና ụgbọala nke General Manager na CEO Nail Kurt na-arụ na nyiwe We Visionary maka iji na ụgbọ mmiri TCG ANATOLIA ọtụtụ ihe. [More ...]